Iimagnethi kwakuse - China Ningbo Sine
Ngcina oomazibuthe asisigxina Magnet + iglu Tape (yoWiso Magnetic) Ningbo Sine Magnetic Company Limited silwenza ngeenxa zonke, disc, okoxande kunye nezinye wena ezimilise neodymium umazibuthe kunye umazibuthe bhetyebhetye nge high quality tape 3M self olomeleleyo -adhesive, nokuba yengcolileyo enamathelayo kabini kabini. izinto abasisigxina nosiba ekhethwa ukuba kunikwa amakhasethi kwakuse: NdFeB umazibuthe N35-N54 amabakala kunye umazibuthe bhetyebhetye. Ngokuqhelekileyo, amakhasethi kwakuse ziyasetyenziswa N esibondeni okanye S po ...
Magnet isigxina + Bukanqinishe Tape (yoWiso Magnetic)
Ningbo Sine Magnetic Company Limited silwenza ngeenxa zonke, disc, okoxande kunye nezinye wena ezimilise neodymium umazibuthe kunye umazibuthe bhetyebhetye nge high quality tape 3M self olomeleleyo -adhesive, nokuba yengcolileyo enamathelayo kabini kabini.
izinto abasisigxina nosiba ekhethwa ukuba kunikwa amakhasethi kwakuse: NdFeB umazibuthe N35-N54 amabakala kunye umazibuthe bhetyebhetye. Ngokuqhelekileyo, amakhasethi kwakuse ziyasetyenziswa N esibondeni okanye S ipali nickel / Zn / irabha ngumfanekiswana neodymium zentsimbi iimagnethi boron okanye iimagnethi un ngumfanekiswana dyondzisaka. Nesingxobo lingakhankanywa yi ngumthengi.
tapes kwakuse: China Rare Earth Magnet Limited usinika 3M iiteyiphu self iglu kunye aqhelekileyo enamathelayo kabini-Amasa ubukhulu: 0.25mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.64mm, 0.8mm, 1.2mm, 1.6mm, 2.0mm, 3.0mm kunye njalo njalo. Abathengi bangakhetha 3M tape imodeli okanye ubungqingqwa ezithile ngokungqinelana neemfuno isicelo eyiyo. I ziyatyeba le enamathelayo kukuthi, kokukhona adhesiveness sayo iya kuba.
Okwangoku, amakhasethi kwakuse ezisetyenziswa ngokuxhaphakileyo ziquka 3M467, 3M9495LE kunye 3M4945.
Yesicelo: umazibuthe Bukanqinishe bhetyebhetye luphawulwa ngamandla Imagnethi buthathaka nemilo bhetyebhetye bokuqhelaniswa magnetization. Ngoko ke, lisetyenziswa kwi woluvo, isixhobo kunye imitha, izibhengezo, umhombiso, iithoyi, xa amakhadi oshishino, incwadi yefowuni, kwaye kwakhona ngakumbi isetyenziswe ucinezelo izithuthi, senior ehotele yokutshixa emnyango, Equipments zonyango kunye nokhathalelo lwempilo.
Njengoko for enamathelayo neodymium umazibuthe esisigxina , ibonisa ubutsalane kakhulu nobugcisa imbonakalo. It jikelele ezisetyenziswa nezixhobo zokucima nokuvula, elektroniki, okanye hardware endlwini yomhombiso, unyango magneto, ubuncinane okanye enkulu abenzi boluvo apha ekhaya okanye iinkqubo zokhuseleko ofisi njalo njalo.
Kunye nomgaqo umgangatho, ityala, iminyinyiva ixabiso kunye nokunikezelwa ekhawulezileyo, sikukhuthaza abathengi abatsha nabadala ukwenza imibuzo.
Previous: Tags Igama Magnetic
Okulandelayo: Coupling Magnetic